IXESHA LOKUHAMBA ELIFILEYO LE-11 ISIQENDU 5: UMHLA WOKUKHUTSHWA KUNYE NESPOILERS - IINKQUBO ZETV
Ixesha lokuHamba eliFileyo le-11 Isiqendu 5: Umhla wokuKhutshwa kunye neSpoilers
Ngokusekwe kuRobert Kirkman, uTony Moore, kunye nothotho lweencwadi zikaCharlie Adlard ezinegama elifanayo, Ukuhamba Abafileyo
Ngokusekwe kuRobert Kirkman, uTony Moore, kunye noCharlie Adlard uthotho lweencwadi ezihlekisayo ezinegama elifanayo, Ukuhamba Abafileyo ngumdlalo kamabonwakude owothusayo waseMelika. Kulandela ukubakho kwamaxhoba okuqhambuka kwe-zombie aphantsi kwesoyikiso esisondeleyo kwizidalwa ezingafiyo ezibizwa ngokuba ngabahambahambayo (kunye namagama afanayo).
Kuza kubakho iziqendu ezingama-24 nge-11 kunye nexesha lokugqibela elinokubakho lokuhamba kwabafileyo, uthotho lukamabonakude waseMelika malunga nokuqhambuka kwesifo seZombie. Emva kokuwa kwempucuko, aba basindileyo banokuzifumana bejongana nabanye abantu abaseke uluntu kunye nemithetho kunye nokuziphatha kwabo, ngamanye amaxesha okukhokelela kubutshaba obuvulekileyo. Nge-22 ka-Agasti ka-2021, ibonakalisa inkulumbuso yomboniso.
Ukusuka kwimiba # 175 ukuya ku-193, ixesha lesibini lihlengahlengisa izinto ezivela kuthotho lweencwadi ezihlekisayo kwaye libonisa iqela elijongana ne-Commonwealth, uthungelwano olukhulu lweendawo zokuhlala ezixhotyiswe ngetekhnoloji ephezulu kunye nezindlu malunga namawaka angamashumi amahlanu abasindileyo. Ngapha koko, ixesha lalijolise kuMaggie kunye neqela lakhe elitsha, iiWadi, njengoko babejamelene nabavuni, iqela elalisisithunzela labantu ababamba iMeridian, indlu eyayisakuba nguMaggie (edlalwa nguLauren Cohan) kunye namanye amalungu iqela lakhe elitsha lemigulukudu.
Ixesha lokuhamba lokuFa eli-11 ngoku liyafumaneka, kwaye ezinye iziqendu sele zisasaziwe. Ixesha lokuHamba eliFileyo le-11 yesi-5 Umhla wokuKhutshwa usondela ngokukhawuleza, kwaye abalandeli banomdla wokwazi ukuba esi siqendu siza kudlala nini. Bebukele nje isiqephu sokugqibela, bonwabile kukwazi ukuba isiqendu esitsha siza kudlala nini.
Umhla wokukhutshwa weXesha lokuHamba lokuFa eli-11 Isiqendu 5
NgeCawa, ngoSeptemba 19, 2021, ngo-9: 00 ebusuku. I-ET ngumhla wokukhululwa kunye nexesha lokuhamba kwabafileyo le-11, isiqendu 5. Kusele nje iintsuku ezimbalwa kude kufike isiqendu sesi-5 somoya wothotho. Ungabukela ixesha lokuHamba eliFileyo eli-11 liyafumaneka kwiNetflix, i-AMC, iPluto TV.
Icebo elinokubakho lesiqendu esizayo
Ngexesha leshumi elinanye le-AMC's Ukuhamba Abafileyo, Ukuphuma komlotha kuza kudlala ngoSeptemba 19. Iziqendu ezili-158 zivelisiwe zizonke kuthotho. NgoSeptemba 19, 2021, ngumhla wokuqala. U-LaToya Morgan uyibhalile. Ngokungafani ne-premiere ye-horror-themed premiere, isiqendu sesine sigxile ngakumbi kubalinganiswa kunokoyikeka.
Endaweni yoko, ibali lisibonisa umhlaba woMvuni ngamehlo enkokeli yabo, uDaryl Dixon (uNorman Reedus), owahlukana neqela lakhe ngexesha lokuhlaselwa kwabo. Ixesha le-11 Isiqendu sesi-4 sabaFileyo abaHambayo sivelisa le mpahla ingaqondakaliyo, isixelela ukuba zibakhuthaze ntoni, ukuba bahlangana njani, kwaye kutheni ingababulali abanamava.
Abavuni banokuba namandla ngakumbi kunoDaryl Dixon, enye yamadoda oyikekayo esakhe sahlangana. Ukudibana kwakhona nomhlobo wakudala kungazisa umahluko omkhulu! Abavuni bathimba uDaryl kunye nenja. Umntu oqhelekileyo ovela kwixesha labo elidlulileyo uyabanxibelelanisa nabo eMeridian. UDaryl akufuneki ukuba akhathazeke ngayo nayiphi na into kwesi siqendu, nangona singafuni ukubamba onke amandla. Ekugqibeleni, yena noCarol bane-spin-off yabo!
Ukubanjwa kwamathambo akhe kunokuba neziphumo ezibi, kodwa siya kuba nakho ukugqitha kuwo. Eyona nto iphambili apha yile nto iphanda kubavuni kunye nendlela enokumchaphazela ngayo ngokwasengqondweni. Njengomboniso usekwizigaba zokuqala zeli xesha lokuphela kwexesha elandisiweyo, sinokulindela ezinye iinguqulelo ezimbalwa. Ukubona abavuni okokugqibela ngaphambi kokuba konke kuthethwe kwaye kwenziwe kunzima ukucinga.
yizinja ezilahlekileyo zebungo ngaphezulu
Ixesha le-aot 4 le-2 yomhla wokukhutshwa
liphuma nini ixesha elitsha lalo lonke elaseMelika
ukubetha ixesha legazi 2 umhla wokukhutshwa
Oomama bokwenyani beeverly hill ixesha le-9 isiqendu se-14
UJulie kunye namaxesha phantoms 2 wokukhutshwa komhla
Ikhowudi geass lelouch yovuko lomhla wokukhutshwa